Online Goods Transportation Service 24X7X365 Mazuva
Local Packers uye movers Mumbai to Bangalore
Akanakisa Packers uye anofambisa Mumbai kuenda kuChennai
Local Packers and Movers Mumbai to Hyderabad 24x7x365 mazuva aripo ekuchinja imba nemabasa ekutamisa hofisi
IBA Yakatenderwa Yenzvimbo Yakanakisa Packers & Movers Mumbai kuPune
Ndedzipi Mhando Dzakasiyana Emasevhisi Ekutakura Mota Anowanikwa muIndia, Uye Vachitaura Mabhenefiti Avo
mabasa ekutakura zvinhu
Makambani anotakura anotakura ndiyo yakanakisa sarudzo kune vanhu vanoda kushandura zvigadzirwa zvemba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Makambani aya zvakare...
Sei Nyanzvi Packers Uye Movers Vanobatsira Mu-Office Kutamiswa?
Makambani anobatsira vanhu nekutakura masevhisi ekufambisa achange aine makambani mumatunhu akasiyana siyana nemaguta akaita seChennai, Bangalore, Kolkata, neMumbai. Zvimwe...
Tese tinoziva kukosha kwekutengeka kwevatakuri vemba uye masevhisi ekufambisa. Yakanaka chiyero icho vashandi vazhinji vekunze kweguta vanofanirwa kushandura zvinhu zvavo ...
Muzana rino ramakore rechi 21, vazhinji vedu takasevenzerwa muzvikamu zvakazvimirira zvakasiyana. Mabasa akadai anoda kuchinjika kubva kune rimwe guta kuenda kune rimwe kune pedyo ...
Masevhisi ekufambisa mota akakosha mukufambisa zvinhu uye zvinotakurwa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe munyika yose. Masevhisi emota dzekurenda anoita zvakakosha...
123...73Page 1 pamusoro 73
mabasa ekutakura zvinhu293
mabasa ekutakura zvinhu ari pedyo neni216
kutakura zvinhu uye Logistics industry72
sangano rekutakura zvinhu55
Mhando dzemotokari dzekutengesa37
Tevedzera tiri Instagram @heavyhaulagetrucks
Ndeapi mabhizinesi nemaindasitiri ane zvakakosha pahupfumi hwenyika?
Bhizinesi rinoonekwa kunyanya munzvimbo dzakabatana, mapepanhau, musika wenguva dzose ndeaya anotevera:-
Oiri refinery Makambani
Masimba Masimba Mashizha
Shuga Plant Industries
Magetsi neMagetsi maindasitiri
Auto components Makambani
Airlines uye Aviation Industries
Courier uye Parcel Industries
Matangi ekuchengetera Industries
Biscuit chokoreti Makambani
Packers Movers Makambani
Paavhareji, mangani marudzi emarori emotokari ekutengesa anowanikwa munyika?
Mazhinji emarori emotokari ekutengesa anoonekwa munyika ndeaya anotevera
Mini Rori (Tempo MCV)
ICV Truck Yepakati yekutengesa mota
Marori eLPT (Marori Marefu ePlatform)
HMV Rori (Mota Inorema)
Vhura Platform Truck
Rori yemarara ine ngozi
Motokari Inotakura Rori
Vadivelu Comedy Dailymotion vi Monster Truck
Chii chinonzi India?
India inyika yeDevbhoomi uye Mambo Bharat ane mbiri. Nekuda kwekureruka, kureruka, kufambira mberi uye kubudirira, kwemakore 1000 apfuura, vapambi vazhinji vekune dzimwe nyika vakauya kuzoiparadza nekunyengera uye vakatyora tsika uye vakaisa hunhu hwavo hwehupenzi patiri nekuudza budiriro yedu yakanaka kuti ive isina simba. Nekuda kweizvozvo, isu hatizive chiHindi kana kunzwisisa Urdu hatigone kutaura Chirungu.
Chii chinonzi postal code yeIndia?
Positi kodhi yakagadziriswa neIndia positi tarisa yako pini kodhi uye yepositi kodhi:-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
nzizi ngani muIndia?
183 + Nzizi muIndia Ref na:- www.pincodeindia.net/list-of-rivers-in-india.php
Madunhu mangani muIndia?
Ndeipi nyika yakakura muIndia?
Rajasthan (342,239 sq km) ndiyo nyika huru muIndia maererano nenzvimbo .
Chii chinonzi pan India?
PAN India ? zvinoreva Kuvepo Munyika Yose. Iri izwi rinosanganisira zvinenge zvese zvinopararira kana zvine chekuita neIndia. Semuenzaniso, zvinogona kunge zviri zvemakambani, mabhizinesi, uye chero chinhu chenyika.
Marori mangani aunawo pamwe chete?
Tine Makori 5000 yakabatana kubva 638 matunhu kwatinotakura kana kudzorera mutoro kubva kumaguta, kumaruwa, metro uye zvakanyanya kuoma nzvimbo dziri kure. Pamwe chete neizvi, tinovapa matai, mabhatiri, maspare parts uye inshuwarisi mitemo pamitengo yevatengesi.Uye 40% yemubatsiro weiyi nzira yese inopa mupiro mudiki kumhuri dzevatyairi vemotokari dzetsaona nekuda kwemari kana hutano zviwanikwa. Kuti hupenyu hwake hwekufa hurege kupera pamberi peSelf respect.
Marori mangani muIndia?
Kuburikidza nezvinyorwa, ruzivo rwakagamuchirwa kuti paavhareji 80 lakh marori ekutengesa anoshandiswa muIndia. Pakati pavo chete 20% vari kushanda zuva nezuva.
Vakasara 30% yemarori kumirira kwenguva yakareba kuti nhamba yavo ionekwe mumakambani ekurodha kana kuburitsa.
On 15% mumigwagwa, marori anorohwa nevakuru vakuru anomira mumigwagwa mikuru kuti awane uori.
10% yemarori dzakapakwa nekuda kwemabhureki kana kushaya mutyairi.
Uye vakasara 25% yemarori vari kumirira mutoro wekudzoka mumaguta madiki, matunhu kana zvisingasvikike nzvimbo dziri kure dzeIndia.
mamiriro e vatyairi vemarori yakashata zvakanyanya nekuda kwekusawana zvakanaka Freight.
Chii chinonzi passive transport?
Passive kutakura haidi kupinza simba. Muenzaniso we kutakura kwekufambisa kupararira, kufamba kwema molecules kubva panzvimbo ye high concentration kusvika kune yakaderera. Mapuroteni anotakura uye mapuroteni emugero anobatanidzwa mukufambiswa kwekufambisa.
Sei Zvekufambisa Uye Logistics ichidhura Yakasiyana muMakambani ese?
Pane zvikonzero zvakawanda zvakakomba zveizvi, nekuda kwekuti zvinotevera zvinokonzeresa zvinowanzoonekwa semugumisiro wepfungwa dzakamanikana.
Hurumende haisati yatara mari dzekufamba kwemakiromita muindasitiri yezvemarori.
Mubatanidzwa wezvekufambisa hauna simba
Hapasati pave nebudiriro inotarisirwa yeindasitiri kana mandis pese pese.
Nekuda kwecapitalism, hutongi hwevanhu vashoma hwakavakwa pabhizinesi iri, iro rine masimba masimba.
Vanasadhu, vanababa, vatungamiri vezvematongerwo enyika nevekunze vanoshandisa mari yevatema kusimudzira capitalism nekubata mabhizimisi. Uye zvakare shandisa nzira dzechisimba kuita purofiti. Nhau idzi dzinoonekwa mumapepanhau.
Nekuda kwekushaikwa kwekubatana, hutongi hwakawedzera uye hupenyu hwevatyairi hwakatanga kusiririsa. Kunyangwe mushure mekushanda maawa gumi nemasere kusvika makumi maviri, kirasi yemutyairi haigone kuita zvavanoda.
Mitengo yemotokari uye zviwanikwa zviri kudhura zuva rega rega, asi mari dzekufambisa hadzina kuwedzera kubva pamakore gumi apfuura uye mari yakawedzera neinopfuura 80%.
Transporter anobhadhara 18% kusvika 28% mutero pamutengo wese asi haawane chero mari yekubhadhara tekisi.
Pane dambudziko rekudzoka mutoro nguva dzose. Mutoro wekudzoka kubva kuTier 2 Tier 3 guta unofanirwa kumirira mazuva mashanu kusvika gumi. Mutoro hauwanikwe kubva kune dzimwe nzvimbo.
Nekuda kwemhoteredzo isina kuchengetedzeka, kuoma kweupfumi hwenyika, huori uye kusazvibata kwevanhu nguva dzese, mutyairi ari mushishi yekudhakwa, izvo zviri kuita kuti tsaona dziri kuwedzera.
Chengetedzo yekubhadhara zvinhu uye kubviswa kwehunyengeri
Zvirongwa zvehurumende nehurumende zvinotadza kuita bhizinesi redu.
Zvese zviri pamusoro zvinokanganisa zvinhu zvako uye mutengo wekufambisa.
Ongorora: - Makumi gumi apfuura mutengo wekufambisa waive 5% yechigadzirwa chako. Parizvino yawedzera kubva pa8 kusvika pa30%
Chii chakasiyana pakati peTransport v/s Logistics?
Transportation ndiyo KUTAMBURA KWANHU KWEZVINHU uye logistics ndiyo KUTUNGAMIRIRA KWEZVINHU ZVINHU ZVINHU ZVINHU NEKUNZE kubva kumugadziri kusvika kumagumo kusvika kumagumo mushandisi….
Nzira yekutanga bhizinesi rekufambisa muIndia?
99% yevatakuri muIndia vane geographical uye nehupfumi kumanikidzwa. Kana iwewo uchida kuita bhizinesi rimwe chetero, zvino richatanga mumakumi maviri kusvika makumi mashanu lakh rupees inova yakavharwa nekurasikirwa mumakore mashanu. Asi kune kumberi uye kwakaringana bhizinesi, iwe vanoda mari inodarika 10 crore, vashandi vane hunyanzvi, tekinoroji yepamusoro, makumi maviri emakore echiitiko neruzivo rwakakwana rwenzvimbo yakakosha.
Ndeipi nzira yakachipa yekufambisa muIndia?
Mvura, ivhu nemhepo, paavhareji, ese masvikiro aya anowanikwa munyika dzese dzekufambisa, asi kuchengeta kwekuenda mupfungwa, kunotemwa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Isu tinopa makumi matatu nemaviri emhando dzekufambisa mabasa mumigwagwa muIndia neAsia Nyika mapurovhinzi ayo anogona kunge akachipa uye anobatsira iwe.
Nzira yekuwana rezinesi rekutyaira muIndia?
Hurumende yakaita nhamburiko dzakawanda mukuwana rezinesi rekutyaira zviri nyore, asi zvakaoma zvikuru kuwana rezinesi pasina mumiririri. Mutengo wayo wekupedzisira unosarudzwawo nemumiririri. Imo iyo iyo laxity inodiwa inoitwa maererano nemari uye somugumisiro mhosva uye njodzi dzinoita sezviri kuwedzera nguva dzose.Kuburikidza neNGO yedu itsva, ibasa redu kupa rezinesi remahara kune vanoshaya vane kudzidziswa kwakanaka kwemwedzi mitanhatu. Kuitira kuti vanoshaya vasina mabasa vawane mabasa uye veruzhinji vawane vatyairi vakanaka uye vepamusoro. Isu tiri padanho rekupa mari yechirongwa chese ichi.
Ndeipi pfungwa isiriyo huru mubhizinesi rekufambisa?
Kuregeredza geography uye kugona mubhizinesi rekufambisa, zvinotendwa kuti varidzi vemotokari vanoshanda nemitengo yakaderera kunyangwe mushure mechikwereti chakawandisa, mutoro uye mari.
Chii chinonzi transport number?
Chii chakanakisa kutumira process?
Isu tinobvunza mibvunzo makumi matatu nenhatu kune vatengi vedu uye tinopa 33 kana 2 zvichienderana nezvavanoda, bhajeti reshiyo uye mutoro. Rori inotumirwa kunorongedzerwa chete mushure mekutora odha yebasa uye 3% kumberi zvichienderana nekupa kwakabvumidzwa. Mushure mekurodha zadzisa zvese zvinyorwa. Uye tora chikamu 20% kubhadhara. Uye zuva nezuva zivisa mutengi nezvekufambira mberi kwebasa rake. Mushure mekuburutsa panzvimbo yavanoenda, mhinduro inotorwa kubva kumativi ese ekuvandudza kwavo mune ramangwana.
Ikozvino hurumende mupiro mukusimudzira bhizinesi reIndia?
Nyanzvi munyaya dzemaindasitiri dzinoti Hurumende inoda kushingirira kutsika kwekushandisa mari yakawanda kune mamwe mapazi. NeHurumende Yanhasi iri kutatarika pazvinhu zvakasiyana zvakaita sedzidzo, zvivakwa, hutano, kubatana nezvimwe. Zvose izvi zvinhu zvikuru zvinomutsiridza kukura nekudzikira kwehupfumi. Kune mazana evemabhizimisi pamwe nevekutanga muzvikamu zvekugadzira zvinhu zvakavandudzwa nehupfumi. Hurumende yakatanga mamwe matanho ekumutsiridza hupfumi hwenyika nekukura. India inopindura kudiwa kwekugadzira pamwe chete nemamwe masevhisi masevhisi ipapo 80% yeGDP inowana kugadzirisa.
Chii chinonzi chikamu chevatengi? Ko Indian customer base class yakaita sei?
Mutengi segmentation hachisi chinhu asi tsika yekukamura mutengi muboka. Yanga ichiita nezvakawanda zvezvinhu zvine chekuita nekushambadzira. Nekudaro, inoita basa rakakosha mukusangana nezvido zvakazara uye maitiro ekushandisa. Saka, yainzi kuongorora nzira dzakananga dzekuronga nezvido zvekushambadzira.
Mamirioni ehuwandu hweIndia vane huwandu hukuru hwekirasi yepasi. Iyo zvakare inoonekwa seyakakwira nekuda kweIndia musika renji. Inosanganisira kirasi yepakati, yakapfuma, uye yepasi-avhareji base kirasi. Iine hupfumi hunofashukira uye dzimwe nguva hunosanganisira muhurombo hwakanyanya. Kutarisa dhatabhesi zvakare kunoratidza iyo hombe Indian base kirasi.
Chii chakakonzera kusiyana kwenzvimbo kunoita kuti zviome kumakambani ebhizinesi renyika zhinji muIndia?
Marudzi, tsika, rudzi, murume kana mukadzi uye mamwe marudzi ekuzivikanwa anosarudza kuti vanhu vanoziva sei, vanoona uye vanoona sei nyika. Vanhu vanobva kwakasiyana nharaunda vanofunga, kuita uye kudzidza zvakasiyana. Zvakaoma kumakambani emabhizimisi emarudzi akawanda muIndia apo vachiedza kunzwisisa vashandi vavo. Kunyanya kukosha, kusiyana kwenzvimbo kunotungamira mukushaikwa kwekubatana mukati mesangano. Kana akasungirirwa nemazvo, kusiyana kwenzvimbo kunogona kupa mune yakazara uye yakawanda-dimensional maonero kune acumen uye huchenjeri mukati memakambani ebhizinesi renyika dzakawanda. Makambani emuIndia haana mamwe matambudziko neakawanda-nyika kutengeserana inobhadharwa Geographical siyana. Imhaka yekuti maitiro acho ari nyore zvishoma.
Pane mota inoshanda yekutengesa zvinhu inowanikwa muIndia sezvaitarisirwa?
Shanduko muIndia inova yechokwadi nehurumende iripo yakatsigira uye kusunda kukuru pakufamba kwemagetsi. Iyo tangi-tangi yehurumende - NITI Aayog yanga ichitungamira shanduko yekuwedzera zero-emission modhi yekufambisa. Multi-Axle Trucks (MATs) anoonekwa seanoshanda zvinhu zvekutengesa mota inowanikwa muIndia uye inoshandiswa zvakanyanya nekufambisa kwemaindasitiri. Mota idzi dzinonyanya kubva pa26.2 ton kusvika 49-ton mota dzinorema. Kutengeswa kwemotokari idzi kwakasvetuka pakati pa2009 na2010 se55% yakakwirira. Mota dzekutengesa zvinhu dzakagadziridzwa zvakanyanya padanho repamusoro-soro 60% yemusika wese wekutengesa mota yakagadziridzwa zvakanyanya.
Ndeupi musiyano uripo mune zvekutakura kana mutengo wekufambisa muIndia?
Chikamu chekufambisa cheIndia chakakura kwazvo uye chakasiyana. Yanga ichiita mhinduro huru yekufambisa mumigwagwa. Pakuchinja zvinhu uye zvigadzirwa, kutakura kwemumugwagwa kunofanirwa uye kunosanganisira zviito zvakanaka. Iine mibairo mizhinji uye ruzhinji rwezvinotengeswa kunze kwenyika runovimba nekufambisa-mumugwagwa. Zvakare, mitengo yekufambisa muIndia inokwanisika uye zvinoenderana nehukuru hwebhizinesi. Inoshanda kubva pakudhindwa kunoita kuti huwandu hwevanhu huve nguva yezvido zvekufambisa. Saka, zvitore zvichibva pakusiyana-siyana mukutakura zvinhu uye mari yekufambisa inogumira kumabhizinesi zvikamu.
Chii chinorema kutakura Oversize ODC yekufambisa basa riri nyore muIndia?
ODC, inodaidzwa kunzi over-dimensional cargo inowedzerwa zvachose kunze kwedeki yemota dzekuchinja zvinhu zvakakura-hukuru. Zvose kureba nekureba kwemutoro zvakakura kudarika mota dzemazuva ese. Iyi mitoro inorema inoshandiswa mune zvese zvepamba uye zvekutengesa zvikamu. Zvifambiso zveODC muIndia zvinogona kubatsira vanhu kutamisa zvinhu zvinorema kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune inotevera nekukurumidza. Imhaka yekuti mota idzi dzakashongedzerwa nemidziyo yakawanda yemazuva ano. Vanokwanisa kutakura zvinhu zvinorema nenzendo refu. Mupi wekufambisa sevhisi ane ruzivo rwakakwana muchikamu ichi, saka timu inoita iyo yese yekufambisa maitiro isina kunetseka.
Vangani vakanaka Goods Carrier vagadziri vemotokari dzemotokari vane mukurumbira munyika?
Kune akawanda emunharaunda kana edunhu vagadziri kana magungano mayuniti anogadzira mota dzekutengesa pasi pemazita mazhinji. Asi isu tichagovana newe runyorwa rweanonyanya kufarirwa epamusoro-magumo, anoshanda uye Yepamusoro mhando inorema basa rori vanogadzira.
Mangani nyika muIndia?
India yakazviita 29 inoti. Kune zvakare 7 nharaunda dzemubatanidzwa .Asi kubva pakuona kwekureruka uye kubudirira, tinozvitarisa maererano nenharaunda inotevera.
South India :- Andhra Pradesh ,Karnataka , Kerala ,Tamil Nadu ,Telangana , Pondicherry (kana kuti Puducherry),
Western India :- Maharashtra , Goa ,Gujarat , Dadra naNagar Beli , Daman & Diu ,Rajasthan
East India (Kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweIndia):- Arunachal Pradesh , Assam , Meghalaya , Manipur , Mizoram , Sikkim , Tripura , Nagaland
mitauro mingani muIndia?
MuIndia, tine mitauro inodarika 1600+ uri rurimi rwaamai. Munzvimbo dzakasiyana dzenyika yedu mutauro wakasiyana unotaurwa nevanhu venzvimbo iyoyo.
Mangani mabhiriji muIndia?
200+ bhiriji hombe muIndia asi nekuda kwehuwori mwero hauna kunaka.
Misha mingani muIndia?
Misha 6,64,369 muIndia.
Ingani nyika uye matunhu emubatanidzwa muIndia?
India yakazviita 29 inoti. Kune zvakare 7 nharaunda dzemubatanidzwa.
Chii chinonzi GDP yeIndia?
GDP pamitengo yazvino muna 2020-21 inofungidzirwa kusvika paRs 197.46 lakh crore zvichipesana nefungidziro yekutanga yakadzokororwa yeRs 203.51 lakh crore muna 2019-20, zvichiratidza kudzikira kwe. -3.0% muzana kana zvichienzaniswa ne7.8 muzana yekukura muna 2019-20, yakadaro shumiro.
UTC / GMT +5: maawa makumi matatu
Ndeipi rori yakanaka?
Kune vazhinji vanogadzira marori muIndia, vari kutora hunyanzvi mazuva ese. Asi zvakadaro maererano neongororo yemigwagwa mikuru
TATA Matori: - Yakanakisa kutengesa, Kugadzirisa, uye kuchengetedza mafuta
Ashok Leyland:- Yakanakira Hill Side Movement.
Eicher: - Super Fuel Efficiency, Yakanakisa Kupwanya System, Yakasununguka uye Smooth Driving.
Mahindra Trucks: - Yakakurumbira muchikamu cheMigodhi
ISUZU :- LCV Segment Yakanakisa kune Diki Yakajairika murume kune Bhizinesi renzvimbo.
Ese Marudzi Marori Uye Nhoroondo Yemarori:- Ndapota Dzvanya
Ndedzipi nzira dzakasiyana dzekutakura?
MuRuzivo rwangu nzira dzakasiyana uye nzira dzekufambisa dziri kutakura mhepo, mvura, uye pasi, iyo inosanganisira Rails kana njanji, ari kuuya modhi tambo nzira uye drones masisitimu
Chii chinonzi transport and communication ?
Zvekufambisa zvine basa rinokosha mukuita zvehupfumi. Pasina kuwana kwenyama kune zviwanikwa uye misika, kukura kwehupfumi nebudiriro hazvaigona. Nzira yekufambisa inoshanda, naizvozvo, chinhu chakakosha mukugonesa kusimukira kwehupfumi.
Ndeipi avhareji mutengo wekutakura zvinhu uye zvekufambisa?
General Goods Transportation 15 Rupees patani pa Kilomita
Oversize Load Goods Transportation 25 Rupees patani paKilomita + Yese Mvumo Mutengo
Terms And Condition Inoshanda
Ndiani akatanga decarbonising transport muIndia?
Sangano reInternational Transport Forum (ITF) neNational Institute for Transforming India (NITI Aayog), vakabatana vakatanga chirongwa cheDecarbonising Transport muEmerging Economies (DTEE) chirongwa muIndia.
Nzira yekutakura mhuka dzinovaraidza muIndia?
Mhuka imhuka yemumba. Munyika ichiri kusimukira yakaita seIndia, uko veruzhinji uye kutakura zvinhu zvisina kunaka, zvakaoma kuwana mutakuri wemhuka. Isu tinokubatsira iwe kuwana akanakisa mutengesi ane kunyatsoshanda poindi yekuona.
Nzira yekuwana rezinesi rekufambisa muIndia?
Diki Yekutakura Kutanga Bhizinesi kunyoreswa kubva kuMSME portal uye Kunyoresa nhamba kubva kuGST portal inowanikwa mahara kumutakuri mutsva musvondo. Kana iwe usingakwanisi, saka GRAHAK SUVIDHA KENDRA ichaita Rs.500. Paavhareji, basa rako richaitwa kusvika bhizinesi remakumi maviri lakhs. Mushure meiyi mapepa mari inozowedzera nemari yako uye bhizinesi. Kana zvichidikanwa, kunyoreswa kwenzvimbo kana nharaunda kunofanirwa kuitwa.
Chii chinonzi transport?
Nzira inoitika mukufambiswa kwevanhu kana zvinhu inonzi transport.Chinangwa chekutamiswa kana kutakura chiri paavhareji kubatsirikana munzira dzakawanda.Zvikurukuru nzira dzayo nhatu dzakakurumbira dzekushanda dzinoti kutakurwa kwemvura, kutakurwa nendege, kufambisa migwagwa.Parizvino, masvikiro matsva senge njanji, tambo, drones ari kushanda uye ari pasi pekuvandudzwa.
Imhando ngani dzekutakura?
Kunyanya ayo matatu anozivikanwa anoshanda masvikiro ndiwo kutakurwa kwemvura, kutakurwa nendege, kutakura migwagwa.Parizvino, masvikiro matsva senjanji, tambo, drones vari kushandawo uye vari pasi pekuvandudzwa.we vanokwanisa 32 marudzi anorema kutakura migwagwa mabasa.
Ndianiko Minister of Transport of India?
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT migwagwa mikuru & SHIPPING
Runhare:+91 11-23711252, 23710121
Chii chinorehwa uye kushandiswa kwekambani kana indasitiri muchokwadi?
Kambani kana indasitiri, muchokwadi, inhengo inonyanya kuita bhizinesi. Iyo kambani inogona kugadzirwa nenzira dzakawanda. Kambani inogona kunge iri mubatanidzwa, bhizimusi rega kana pasi pemubatanidzwa. Zvichienderana nekambani yakasiyana yauri kubata nayo, inogona kunge iri yemunhu mumwechete kana kunyange boka revanhu. Iyo kambani inogona kurongeka zvakanaka mumamiriro mazhinji. Liability imhando yakakosha yekambani inonyanya kufungidzirwa. Kambani kana indasitiri muIndia ine kukura kukuru nekuvandudzwa kwehunyanzvi hwazvino uye zvivakwa zvekufambisa munyika yese.
Zvido zveveruzhinji zvinei paindasitiri kana kusimudzira maindasitiri?
Kubudirira kwemaindasitiri kune kukanganisa kukuru munharaunda uye vanhu vanofanirwa kutarisira shanduko munyika. Zvichienderana nezvido zveveruzhinji muindasitiri, purofiti nemabasa zvinokwira. Yakawedzera mukusimudzirwa kwemaguta uye vanhu vakatamira kunzvimbo yemadhorobha mukusimudzira kutsvaga. Kufambiswa kwemumugwagwa, imwe budiriro yanga ichitanga kubatsira nzanga. Kusimukira kwehupfumi kwatorawo shanduko mumaindasitiri. Zvakaunza shanduko huru munharaunda pakati pezvido zveveruzhinji pakusimudzira maindasitiri. Revolution yakaunza kutarisisa shanduko dzakakosha mukufambisa kwemigwagwa pamativi emaindasitiri. Vashandi vanobhadharwa uye vanotora zvakanakira mukugadzirwa kwakawanda kwezvinhu.
Chii chinonzi Logistic uye chii chinoshanda?
Logistics inoshandiswa zvakanyanya kureva maitiro ekufambisa zviwanikwa zvinosanganisira midziyo, zvigadzirwa, zvigadzirwa, uye hesiti kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune inotevera kune kwakanangwa kuenda. Iri izwi rinoshandiswa muzvishandiso zvakawanda. Kune marudzi akasiyana emasevhisi ekutakura anowanikwa asi zvekufambisa mumigwagwa zvinowana mukurumbira pakati pevashandi vebhizinesi. Imhaka yekuti kana zvigadzirwa zvebhizinesi kana zvinhu zvisingakwanisi kusvika kune vatengi, zvinokundikana. Ndiyo nzvimbo yakakodzera apo zvifambiso zvomumugwagwa zvinoita basa rinokosha. Zvinokanganisawo zvimwe zvakawanda zvemabhizinesi. Kana zvigadzirwa zviri kutakura kune vatengi vako nenguva, zvinowedzera purofiti yekambani.
Ndeapi marudzi ekufambisa anoshandiswa zvakanyanya muIndia?
Nekukurumidza kukura kwemadhorobha muIndia, kukura kweEconomic yenyika kwawedzerawo. Sitimu yekufambisa zvakanyanya yakagadziridzwa kuita nzira dzakasiyana dzakadai sekutakura migwagwa, njanji, kutakura mumvura mukati, nhandare dzendege, uye ndege, ngarava dzemahombekombe uye zvimwe zvakawanda. Migwagwa ndiyo nzira huru dzekutakura dzakatakura chikamu che85% chese traffic inogadzirwa munyika. India ine mota dzinosvika miriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nenomwe dzakanyoreswa uye Compound Annual Growth Rate kubva kuMota dzakanyoreswa dzese muIndia dzakavandudzwa kusvika pa191.7%. Nekuwedzera kwehuwandu hwemotokari mumigwagwa, zvinogadzirawo nzira yekusimudzira bhizinesi.
Ndezvipi zvakaipira bhizinesi rekufambisa?
Hezvino zvakaipira bhizinesi rekufambisa sezvinotevera:
Kakawanda Njodzi Zvifambiso zvemumugwagwa muIndia zvine njodzi. Matanho akakodzera ekuchengetedza haana kumboitwa panjodzi dzemumugwagwa.
Migwagwa isina kukwana Migwagwa mizhinji muIndia haina kukwana uye inowanikwawo mune yakaipa chimiro. Pane migwagwa yakareba 34 km pa100 sq.km yega yega.
Heavy Taxes ndechimwe chisungo chebhizinesi rekufambisa mumigwagwa. Mutero wemutero pamotokari munyika ino iRs. 3500.
Kusagadziriswa kwemigwagwa Migwagwa muIndia haina kuchengetedzwa zvakanaka. Pane chete 0.1% yemuhoro wenyika inoiswa mukugadzirisa migwagwa muIndia.
Kukwira kwemutengo wedhiziri nepeturu Huwandu hwemashandiro ekufambisa mumigwagwa huri kuramba huchikwira.
Haikodzeri zvinhu zvakakuraHazvina kukodzera zvinhu zvinorema
Ndeapi matambudziko makuru ebhizinesi muIndia?
Kubva panguva yekare maIndia ave achikurudzira runyararo. Bhizinesi rakavandudza zvakanyanya kusvika padanho repamusoro asi kune zvakare mamwe matambudziko ayo mazhinji ebhizinesi anotarisana nawo. Zvingave zvine hukama nehurumende, mhosva dze 'vamwari', mamiriro emigwagwa, huwori, kana zvimwewo, bhizinesi rinokanganiswa mune mamwe mamiriro. Huwori ndiro dambudziko rakaipisisa rinopararira muIndia saka zvakakosha kuti riitwe nehungwaru uye nekukurumidza. Kunyangwe nyika yedu ichida shanduko dzakati wandei parizvino pazasi zvimwe zvezvinhu zvakakosha izvo zvatinofanira kufunga nezvazvo kugadzirisa nekukasira.
– Kusagona kuverenga
– Dzidzo system
– Basic Hutsanana
– Kuchengetedzeka kwevakadzi
Chii uye vangani vanowira padambudziko rakashata rebhizinesi rekushata basa rekufambisa?
Nekuda kwekusashanda zvakanaka kwezvekufambisa, mabhizinesi mazhinji akakanganisika. Kuchinjisa zvinhu kuenda kunzvimbo kwakanganiswa nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemigwagwa. Zvinosanganisira huwandu hukuru hwezvinhu zvekuchengeta mupfungwa uye kugadzira kuchaita pazasi. Kuti udzore mamiriro ezvinhu aya, kutadza kwekufambisa kunoda kukunda nekukurumidza sezvinobvira. Inowedzera migwagwa yakakwana mumaruwa inowanzowedzera kugadzirwa. Pamari yekurima nemisika, kutakurwa kwemigwagwa kunofanirwa. Saka, kusafambiswa zvakanaka kunofanirwa kugadziriswa nekutora zviyero zvakakodzera. Kunyanya kumaruwa, zvekufambisa zvakakosha kuita zvinhu zvakawanda zvakanaka. Saka, hurumende inofanirwa kutora matanho akakodzera kudzivirira pfungwa isiriyo iyi uye kuita zvakanakisa kusimudzira kufambiswa kwemigwagwa.
Iyo yehurumende yeIndia mutemo wakanyatsokodzera kuita bhizinesi?
Munguva pfupi yapfuura, hurumende yeIndia inotungamirwa naNarendra Modi iri kutarisa zvakanyanya kune yakafara nyika yenhamba isingaperi yevanotanga kubuda. Nekuita izvi, hurumende yeIndia iri kugadzira mikana mitsva nezvirongwa. Ivo vanobatsira makambani mune zvese mukurera uye innovation. Kune akawanda matanho akatorwa nehurumende yeIndia kutsigira bhizimusi idzva. Izvo zvakare ine chinangwa chekusimudzira budiriro yekusika pakati pevadiki veIndia. Nekubatsirwa kwakasarudzika uye kwakakura kwenhamba, India inogona kusimudza nekuvandudza bhizinesi yega uye kuita mabasa acho kuti abatsire nyika ino nepasirese. Matanho ese anotorwa kuti nyika ibudirire uye ikure.
Vehicle Details Kutarisa
India's 1st Heavy Haulage Trucks Aggregator
Material Kubata Logistics Tsigiro uye Warehousing
Webhu: - www.roadstransporter.com
Mutengi Tsigiro: - +919408275245
India Nguva Zone :- 8AM kusvika 8PM
Kujeka kwebhizinesi, hushamwari kushandira pamwe uye kubatana, kunyatsoshanda, kutungamira kwakaringana uye mhedziso yepamusoro ndeye ABCC INDIA Project Cargo Corporation tsananguro. India, Nepal, Bhutan, Bangladesh 686 matunhu 6,49,481 inoisa iyo inogara iripo, yakapusa, inosvikika, inotengeka, Inovimbika, yakakosha, inotakura nemasevhisi ehupfumi, nzvimbo yedu yehunyanzvi uye ine chiremera munyika dzese. Isu tine simba rese rekuwedzera kujeka uye kureruka kwebhizinesi nekupa zvinoenderera, zvisina rusaruro, zviri nyore, zviri nyore uye zvakavimbika masevhisi kumunhu wese munzvimbo dzese maererano nezvido zvemuzvinabhizinesi. Nemhedziso dzakanakisa nekubatanidza purovhinzi yega yega neyakanakisa uye hwaro hwemisimboti, maonero ebhizinesi renyika uye rukudzo zvakaenderera munzira yekufambira mberi. Nezvatisingakwanise kuwana zita renyika iri kusimukira asi nyika ichiri kusimukira. Mipiro yevatengi & kuvimba kwakakosha kupfuura kugona kwemakambani kuburitsa mhedzisiro yakanaka, kuvimba kwevatengi uye kugutsikana ndiko kubudirira kukuru kwesangano redu.
Fonera Ikozvino Bhatani